PATHOS - လိင်စွဲလမ်းမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်အတွက်အကျဉ်းချုပ်စစ်ဆေးခြင်းအတွက်လျှောက်လွှာ (၂၀၁၂) - သင့် ဦး နှောက်တွင်အပေါက်
PATHOS: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ (2012) အကဲဖြတ်များအတွက်တစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်စိစစ်လျှောက်လွှာ
J ကိုစွဲ Med ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC 2013 မတ်လ 1 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
: နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ပုံစံထဲမှာရှိသကဲ့သို့ Published J ကိုစွဲ Med ။ 2012 မတ်လ; 6(1): 29-34 ။
ပက်ထရစ်ဂျေ Carnes, Ph.D ဘွဲ့ကို,1 Bradley အေအစိမ်းရောင်, Ph.D ဘွဲ့ကို,2 Lisa ကိုဂျေ Merlo, Ph.D ဘွဲ့ကို, MPE,3,4 Alexis poll, MD5 Stefanie Carnes, Ph.D ဘွဲ့ကို,6 နှင့် မာကုအက်စ်ရွှေ, MD3
လိင်စွဲလူဦးရေရဲ့ 3-6% အထိနှောင့်ရှက်ဖို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ သို့သော်များစွာသော Clinician အလားအလာအမှုပေါင်းဖော်ထုတ်မယ်အဘို့ရှင်းလင်းစွာစံကင်းမဲ့နေသည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုများမှန်ကန်စွာလိင်စွဲလမ်းနှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအတွက်ကုသခံလူနာများခွဲခြားရန်အကျဉ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲစိစစ်တူရိယာ (ဆိုလိုသည်မှာ PATHOS မေးခွန်းလွှာ) ၏ထိရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
လေ့လာမှုတစ်ခုမှာ, အ mnemonic "PATHOS" အသုံးချရာခြောက်ကို item မေးခွန်းလွှာခုနှစ်တွင် 970 ယောက်ျား / 80.2% လူနာ (လိင်စွဲလမ်းနှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအတွက်ကုသခံလူနာများပေါင်းစပ်ပြီးနမူနာသုံးပြီး sensitivity ကိုနှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖို့ကိစ်စတှငျလေ့လာခဲ့သည်; 938 အမျိုးသမီးတွေ / 63.8% လူနာများ)။ လေ့လာမှုနှစ်ဦးအတွက်, 672 ယောက်ျား (93% လူနာ) နှင့် 241 အမျိုးသမီးတွေ (35.3% လူနာ) ၏ Cross-validation ကိုနမူနာအဆိုပါ PATHOS Screener ပြီးစီးခဲ့သည်။
အာအိုစီ၏ရလဒ်များလေ့လာမှုတစ်ခုမှာအတွက်လေ့လာဆန်းစစ်သည့် PATHOS ဟာကွေးအောက်ရှိဧရိယာ၏ 92.6% ဖမ်းဆီးရမိကြောင်းသရုပ်ပြ, နှင့်အထီးနမူနာ (ဎ = 88.3) ခွဲခြားဘို့ 81.6% sensitivity ကိုနှင့် 963% တိကျတဲ့အောင်မြင်နေတဲ့ cut-off ကို အသုံးပြု. လူနာများနှင့်ကျန်းမာဘာသာရပ်များအဖြစ်3၏ရမှတ်။ အလားတူပဲ, PATHOS ဟာကွေးအောက်ရှိဧရိယာ၏ 90.2% ဖမ်းခြင်းနှင့်,3တစ် cut-off နှင့်အတူ, 80.9% sensitivity ကိုနှင့်အမျိုးသမီးနမူနာ (ဎ = 87.2) အတွက် 808% တိကျတဲ့အောင်မြင်။ လေ့လာမှုနှစ်ခုတွင်ခုနှစ်တွင်အာအိုစီ၏ရလဒ်များ PATHOS (ဖြတ်-ချွတ် 85.1 ၏) ယောက်ျားအဘို့အ 70.7% ၏ 86.9% နှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်၏ sensitivity ကိုနှင့်တကွ, ကွေးအောက်ရှိဧရိယာ၏ 3% ဖမ်းဆီးရမိကြောင်းညွှန်ပြလေ့လာဆန်းစစ်။ အမြိုးသမီးမြားအဘို့, PATHOS ဟာကွေးအောက်ရှိဧရိယာ၏ 80.9% ဖမ်းခြင်းနှင့် 69.7% sensitivity ကိုနှင့် 85.1 ၏ cut-off နှင့်အတူ 3% တိကျတဲ့အောင်မြင်။
ဒီလေ့လာမှုတွေကလက်တွေ့ setting တွင်အလားအလာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲရောဂါဖြစ်ပွားမှု detect ဖို့စိစစ်တူရိယာအဖြစ် PATHOS ၏အသုံးပြုမှုကိုထောက်ပံ့ပေး။
keywords: လိင်စွဲလမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, စစ်ဆေးခြင်း, အကဲဖြတ်, Psychometrics
Pathos: စိတ်လှုပ်ရှားမှု, အထူးသဖြင့်ဝမ်းနည်းခြင်းသို့မဟုတ်သနားနှိုးဆွသော
- ဂရိမှ pathos "ဆငျးရဲဒုက်ခ" အတွက်
လိင်စွဲလမ်း (စလိင်မှီခို, Hypersexuality, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorder, Paraphilia-Related Disorder, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse, Nymphomania နှင့်ထိန်းချုပ်ရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထဲကအဖြစ်ရည်ညွှန်း) အတော်လေးဘုံရောဂါဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဒါဟာ [အမေရိကန်လူဦးရေရဲ့ 3-6% အထိအကျိုးသက်ရောက်စေသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်Carnes, 1991] နှင့်နယူးဇီလန်ကနေမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုကဒီအပြုအမူ၏ subclinical အဆင့်ဆင့်အများကြီးပိုမိုမြင့်မား [Skegg et al 2009] ဖြစ်မည်အကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ လိင်စွဲလမ်း "မှုများထပ်တလဲလဲ, ပြင်းထန်သော, လိင်နှိုးဆွသောစိတ်ကူးယဉ်, သွေးသားဆန္ဒရမ္မက်, သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးခြောက်လတစ်ကာလအတွင်းဆက်လက်ရှိနှင့် paraphilia ၏အဓိပ္ပါယ်အောက်မှာလဲကြမအပြုအမူတွေ၏ဖြစ်တည်မှု" အဖြစ်ဖော်ပြထားနှင့်သိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ချို့ယွင်းခြင်းဖြစ်စေသည်ထားပြီး ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရသောသူတစ်ဦးချင်းစီ [မှStein, အနက်ရောင်, Pienaar, 2000] ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှင့် ပတ်သက်. သိသာထင်ရှားသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်လူမှုရေးအကျိုးဆက်များနေသော်လည်းအတော်လေးနည်းနည်းအာရုံစူးစိုက်မှုကဒီလေးနက်ရောဂါမှပေးဆောင်ခဲ့သည်။ အာရုံစူးစိုက်မှုမရှိခြင်းသည်၎င်း၏ etiology နှင့် nosology နှင့် ပတ်သက်. ရှုပ်ထွေးမှုများ, ကြီးတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်ကြောင့်ဖွယ်ရှိသည်။ တကယ်တော့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲပင် [စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏ Diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲထဲမှာမပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ယား, 2000] "hypersexual ရောဂါ" လာမယ့်ထုတ်ဝေများအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်တွင်ဖြစ်သော်လည်း [Kafka, 2010].
ကံကောင်းထောက်မစွာ, အသိပညာတစ်ခုကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်ပြဿနာကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ကိုဖော်ပြရန်ထွန်းသစ်စသည်။ ဥပမာ, ဂျာနယ်, လိင်စွဲလမ်းနှင့် compulsive: ကုသမှုနှင့်ကာကွယ်ရေးများ၏ဂျာနယ်စာစောင်၎င်း၏နန်းစံနှစ်ဆယ်၌တည်ရှိ၏။ အလားတူပင် Sadock နှင့် Sadock ရဲ့ (2005), စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဘက်စုံဖတ်စာအုပ် [လိင်စွဲလမ်းနှင့်၎င်း၏ကုသမှုအပေါ်တစ်ဦးအခနျးတှငျပါဝငျသညျCarnes, 2005] ။ သို့သော်လက်ရှိအချိန်တွင် "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ" အဖြစ်ရည်ညွှန်းအပြုအမူတွေ၏ကြယ်ပထမဆုံး [Orford ခြင်းဖြင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြOrford, 1978 & 1985] ။ ဤလုပ်ငန်းကို [Carnes အားဖြင့်နက်ရှိုင်းပိုမိုဖော်ပြချက်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်1983, 1988, 1991a] Goodman နှင့် Earl ။ အမျိုးမျိုးသောသုတေသီများ [ဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်း၏လက္ခဏာများကိုပြသတစ်ဦးချင်းစီမှရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက်တီထွင်သောသူတို့အားစင်ပြိုင်ထားတဲ့ရောဂါရှာဖွေစံလျှောက်ထားကြပါပြီCarnes, 1983, 1988, 1991a နှင့် Schneider, 1991] နှင့်အခြားသူများကိုဤလူဦးရေမှလွတ်လပ်သောအဖြေရှာတဲ့စံလျှောက်ထားကြပါပြီ [အနက်ရောင်, 2000].
စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသုတေသန [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏ etiology ဆန်းစစ်နှင့်စိတ်ဒဏ်ရာများ၏သမိုင်းအပါအဝင်ဘုံမျှဝေသူ, ဖော်ထုတ်ထားပါတယ်Earl နှင့် Earl, 1995], မိသားစုအချက်များ [Sussman, 2007] နှင့်ထိုကဲ့သို့သော "ဘာ" အဖြစ်ထူးခြားတဲ့စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့ [Hunt & Kraus, 2009] ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အများကြီးအာရုံစိုက်မှု [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှင့်အခြားစွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏ Co-ဖြစ်ပျက်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားပြီးCarnes, Murray နှင့် Charpentier, 2005] ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏ neuroscience ၏အစောပိုင်း Conceptual [သည့် 1980 ရဲ့၌ထငျရှားMilkman နှင့် Sunderwirth, 1987] နှင့် neuroscience သုတေသနအခြေစိုက်စခန်းဖွံ့ဖြိုးပြီးသည်အတိုင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲအခြေခံဇီဝဗေဒယန္တရားများ [ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြဘာလင်, 2008; Cozolino, 2006; Kafka, 2008; Krueger & Kaplan, 2000; Stein et al ။ , 2000] ။ လက်ရှိသုတေသနအနှစ်ချုပ်မှကွန်ကရစ်အားထုတ်မှု [ပိုများသောယေဘုယျဆေးဘက်ဆိုင်ရာဂျာနယ်ထဲမှာသည်ထင်ရှားရှိသည်ဟုColeman, 1990, Coleman-ကနေဒီ 2002] ။ အလားတူပင်ကုသမှုချဉ်းကပ်ဖော်ပြထားခဲ့ကြခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောလူဦးရေ [လေ့လာခဲ့Carnes နှင့်အဒမ်, 2002].
သို့တိုင်, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှင့် ပတ်သက်. အသိပညာပေးတဲ့ဆွေမျိုးမရှိခြင်းလည်းမရှိ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Clinician ဒီအခွအေနေကနေဆင်းရဲခံရသောတစ်ဦးချင်းစီကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ကူညီရန်သက်သေအထောက်အထား-based အကဲဖြတ် / စိစစ်ဆောင်ရွက်မှုများတစ်ဦးမရှိခြင်းလည်းမရှိ။ အတူတကွဤအချက်များထိရောက်သောကုသမှုမှလူနာ access ကိုအတူဝငျရောကျစှကျပါပွီ။ ထို့ကြောင့်လှောင်အိမ်မေးခွန်းလွှာဆင်တူရိုးရှင်းစိစစ် application ကို generate ရန်လိုအပ်ကြောင်းအဲဒီမှာတည်ရှိ [Ewing, 1984] အရက်၏ထောက်လှမ်းဘို့အတို Screener (ဆိုလိုသည်မှာ, C ကို = သငျသညျအစဉျအမွဲသင်သည်သင်၏အရက်သောက် ?, တစ်ဦးက = ကလူ, သင်၏အရက်သောက်ဝေဖန်အားဖြင့်သင်တို့ကိုအာရုံနောက်ဖူးကိုခုတ်လှဲရန််၏ခံစားခဲ့ရဖူးတာဖြစ်ပါတယ် ?,, G = သင်ကအစဉ်အဆက်မကောင်းတဲ့ခံစားခဲ့ရသို့မဟုတ်ဖူးရသော သင့်ရဲ့သောက်သုံးရေနှင့် ပတ်သက်. အပြစ်ရှိကြောင်း ?, E = သင်အစဉ်အဆက်) သင့်အာရုံကြောမြံဖို့ဒါမှမဟုတ်ရက်နာ [မျက်စိ-ဖောက်တံ] ဖယ်ရှားပစ်ရနံနက်ယံ၌သောက်ပထမဦးဆုံးအရာရှိခဲ့ပါ။ လှောင်အိမ်စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်အထွေထွေဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ settings ကိုနှစ်ဦးစလုံးတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင် Clinician များအတွက်အသုံးဝင်သောအခြေခံစံနှုန်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲအကဲဖြတ်တဲ့အရေအတွက်ကသည်ထင်ရှားရှိသည်ဟုနှင့် extant စာပေအတွက်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ [Carnes, အစိမ်းရောင်နှင့် Carnes, 2010; Delmonico နှင့် Miller က 2003; et al ချိတ်။ , 2010; Kalichman နှင့် Rompa, 2001] ။ အများဆုံးကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့တစ်ခုမှာအနည်းဆုံးရှစ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရာတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့်စမ်းသပ်ခြင်း (SAST), သက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ်ပင်ကိုယ်မူလလေ့လာမှုများပြသည့်လိင်စွဲလမ်းဖြစ်ပြီး, ပုံမှန်အတော်ကြာအတွင်းလူနာလူနေအိမ်ကုသမှုစင်တာများမှာများနှင့်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းလိင်စွဲလမ်းနေဖြင့်လက်တွေ့တွင်အသုံးပြုသည် ကုသအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတလွှား (CSATS), နှင့်အခြားသောနိုင်ငံများရှိ။ ဒါဟာပထမဦးဆုံး [1989 ၌ထငျရှားCarnes, 1989] နှင့်နောက်ပိုင်းတွင် (SAST-R) ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောထားပြီး [Carnes et al ။ , 2010] ။ အဆိုပါ SAST နှင့် SAST-R ကိုနှစ်ဦးစလုံးလက်တွေ့အတွေ့အကြုံကဆယ်စုနှစ်များစွာအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်။ သို့သော် SAST-R ကိုယေဘုယျအားလက်တွေ့ဆက်တင်များ (ဥပမာဆရာဝန်၏ရုံးခန်းသို့မဟုတ်အရေးပေါ်အခန်း) တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်ကြောင့် unwieldy အောင်, (ဆိုလိုသည်မှာ 45 ပစ္စည်းများ) အတော်လေးရှည်လျားသည်။ အဘယ်သူမျှမတသမတ်တည်းစိတ်ကူး, ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်, ဒါမှမဟုတ်ရောဂါရှာဖွေစံများနှင့်တစ်ဦးစုံစုံအကဲဖြတ် device ကိုရှိဘို့လိုအပ်ကြောင်းနှင့်အတူတစ်ဦးရောဂါမှပင်ဆင်းရဲသူကိုတစ်ဦးချင်းစီဖော်ထုတ်မှမွေးရာပါရှုပ်ထွေးမှုများပေးထား, ဒီလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်သည် PATHOS ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ Clinician ကူညီပေးဖို့အကျဉ်းစိစစ်တူရိယာခဲ့သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲရှိစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်တစ်ဦးချင်းစီ၏မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူ။ နှစ်ခုလေ့လာမှုတစ်ဦးကစီးရီးတိုင်းဖွံ့ဖြိုးဖို့နဲ့သီးခြားနမူနာပေါ်မှာမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ရန်အတွက်ကောက်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါ PATHOS အဆိုပါ SAST နှင့် SAST-R ကိုနှစ်ဦးစလုံးတှငျတှေ့ခြောက်လပစ္စည်းများပါဝင်သည်။
Method ကို: လေ့လာမှုတစ်ခုမှာ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲဘို့အဖြေရှာတဲ့စံသေး Diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲတွင်ထည့်သွင်းရကြပြီမဟုတ်ကြောင်းပေးထား, ကုသမှုများအတွက်ရည်ညွှန်းလူနာအားဖြင့်သာတည်စံနှုန်းများကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ဦးလက်တွေ့အင်တာဗျူးအပေါ်အခြေခံပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲရောဂါခဲ့ကြသည် Carnes (2001)။ ဤရွေ့ကားအဖြေရှာတဲ့စံစာရင်းဝင်နေကြတယ် စားပွဲတင် 1.
လိင်စွဲလမ်းလူနာများအဘို့အ diagnostic လိုအပ်ချက်
PATHOS ပစ္စည်းများဒီလေ့လာမှုမှာမူရင်း SAST များမှထုတ်ယူခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ SAST [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလက္ခဏာတွေများအတွက်အကဲဖြတ်ထားပါသည်တစ် 25-item ကိုတိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်Carnes, 1989] ။ ပစ္စည်းများအားလုံး (Yes / No) dichotomously သွင်းယူနေကြသည်။ နမူနာပစ္စည်းများ "? သင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကထိန်းချုပ်ထားခံစားရပါ" တို့ပါဝင်သည်နှင့် "သငျသညျကိုအခြားသူများမှသင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအချို့ကိုဖုံးကွယ်သလား" ယခင်သုတေသန SAST ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ထိရောက်စွာလိင်စွဲနှင့် nonaddicts အကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုရှိသည်ဟူသောသရုပ်ပြခဲ့သည်။ လိင်စွဲအဖြစ်သာ 13 96.5 သွင်းယူ% သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို nonaddicted ရှိ. , အရှင် SAST သုံးပြီး misclassified နေစဉ် cutoff ရမှတ်အဖြစ် 3.5 အသုံးပြုခြင်း, ဖြေဆိုသူ 13% မှန်မှန်ကန်ကန်, ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ ဒီနမူနာအဘို့, SAST ၏ပြည်တွင်းရေးကိုက်ညီမှု [(KR-20 = .94) အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ခဲ့သည်ဂျော့ခ်ျနဲ့ Mallery, 2003].
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုနမူနာ (N ကို = 1,908) တစ်ဦးချင်းစီ၏နှစ်ခုခွဲနမူနာ၏ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ 1,118 နှင့် 30.4 အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲများအတွက်လူနေအိမ်အတွင်းလူနာကုသမှုစင်တာမှာကုသခံနေရသူ 340 လူနာ (1996% အမျိုးသမီး, ဎ = 2004) မှဒေတာများကဒီလေ့လာမှုမှာစာရင်းသွင်းခဲ့သည်။ အမည်မဖော်လိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အလို့ငှာ, လူဦးရေဒေတာလူနာနမူနာထံမှကောက်ယူမခံခဲ့ရပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, 790 ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်း (75.7% အမျိုးသမီး, ဎ = 598) ၏စုစုပေါင်းတစ်နှစ်တစ်ကာလအတွင်းကြီးမားတဲ့တောင်ပိုင်းတက္ကသိုလ်ကနေစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ကျောင်းသားနမူနာ (18-58 နှစ်ပေါင်းထံမှအသက်အရွယ်အတွက်အရွယ်ရှိM = 20.60, SD Black က / အာဖရိကန်အမေရိကန် (3.88% ဎ = 59.6) နှင့် "အခြား" (471% ဎ = 37.1) ကနောက်တော်သို့လိုက်အဓိကအား = 293) နှင့် Self-အစီရင်ခံကော့ကေးဆပ် (1.4% ဎ = 11 ကဲ့သို့) ။ အဲဒီမှာ (1.0%) ရှစ်ဟစ်စပန်းနစ်ခြောက်လအာရှ (0.8%) ကိုလည်း ရှိ. , တဦးတည်းကအမေရိကန် (0.1%) တစ်ဦးချင်းစီနမူနာများတွင်ပါဝင်သည်။ နှစ်ခုနမူနာအကြားကျားမအချိုးအစားအတွက်သိသာကွာဟမှုကိုပိုမိုယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ထက်လိင်စွဲလမ်းများအတွက်ကုသမှုကိုရှာနှင့်ပိုပြီးအမြိုးသမီးကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းသင်တန်းသားများကိုစုဆောင်းခဲ့ကြရှိရာတက္ကသိုလ်ယောက်ျားထက်သုတေသနတွင်ပါဝင်ရန်ကြောင်းကိုဆိုတဲ့အချက်ကိုထင်ဟပ်။
လူနာနမူနာများတွင်တစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့လက်တွေ့စားသုံးမှုစဉ်အတွင်း SAST မေးခွန်းလွှာအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ de-ဖော်ထုတ်တုံ့ပြန်မှုကဒီလေ့လာမှုများအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများများမှထုတ်ယူခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ PATHOS ၏ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတရားဝင်မှုအကဲဖြတ်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်နမူနာတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်နမူနာအဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက်စုဆောင်းခဲ့သည်။ Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ (IRB) ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူကောလိပ်ကျောင်းသားနိဒါန်းစိတ်ပညာသင်တန်းများအတွက်တက်ရောက်သူများမှတဆင့်လေ့လာမှုအကြောင်းကိုအကြောင်းကြားခဲ့ကြသည်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏သင်တန်းလိုအပ်ချက်များကို၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ကတခြားလေ့လာမှုတွေအမျိုးမျိုးတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ အသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးနောက်သင်တန်းသားများသည်တိုတောင်းတဲ့လူဦးရေဆိုင်ရာမေးခွန်းလွှာများနှင့် SAST ဖြည့်စွက်ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။
SAST ပစ္စည်းများကိုရှာဖွေတူးဖော်ခွင့်ကျောင်းအုပ်ကြီးအစိတ်အပိုင်းများရလဒ်များကိုအခြေခံပြီး PATHOS အပေါ်ပါဝင်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည့် SAST နှင့် W-SAST ၏လေ့လာဆန်းစစ်1, ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမြင်၏အသေးစိတျအဘို့ [လိင်စွဲလမ်းတစ်လေး-Factor ဖွဲ့စည်းပုံမှာအကြံပြုထားတဲ့: Carnes, အစိမ်းရောင်နှင့် Carnes, 2010] ။ လေး PATHOS ပစ္စည်းများလိင်စွဲကုသခံနှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့အမြင့်ဆုံးအချက်တစ်ချက်တင်ပေါ်တွင်အခြေခံလေးပါး SAST အချက်များ (အာရုံစိုကျလှနျး, ထိန်းချုပ်ရေး, ဆက်ဆံရေးနှောင့်အယှက်များနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေနှောင့်အယှက်များဆုံးရှုံးမှု) ကိုအသာပုတ်ဖို့ရှေးခယျြခဲ့သညျ။ နှစျဦးအပိုဆောင်းပစ္စည်းများကိုအထူးပထမလေးပစ္စည်းများဖြင့်ကိုယ်စားပြုမဟုတ်လိင်စွဲလမ်း (အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်ကုသမှုရှာ), နှင့်ဆက်စပ်သည်အခြားဆေးခန်းအရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်များကိုကိုယ်စားပြုရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံးဗားရှင်းက၎င်း၏ပစ္စည်းများကိုထံမှတီထွင် mnemonic အပေါ်အခြေခံပြီး, ထို PATHOS မေးခွန်းလွှာအမည်ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ PATHOS မေးခွန်းလွှာပစ္စည်းများအတွက်စာရင်းသွင်းထားပါသည် စားပွဲတင် 2.
ရလဒ်များအုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ internal ကိုက်ညီမှု KR-20 လေ့လာဆန်းစစ်သုံးပြီးသီးခြားစီယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုနမူနာအဘို့အအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ဖော်ပြရန်နှင့် inferential စာရင်းဇယားလည်းယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့သီးခြားစီတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ ကို T-စမ်းသပ်မှုလူနာနမူနာနှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအကြားခြားနားချက်များ၏အရေးပါမှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အသုံးပြုသွားမည်ခဲ့ကြသည်။ receiver လည်ပတ်မှုဝိသေသလက္ခဏာများ (အာအိုစီ) ကအကောင်းဆုံးလက်တွေ့ cut-off ရမှတ်ဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုသွားမည်ခဲ့ကြသည်လေ့လာဆန်းစစ်။
970 ယောက်ျားတစ်ဦးစုစုပေါင်းလေ့လာမှုမှာပါဝင်ခဲ့။ လူနာနမူနာ (ဎ = 778) တွင်လူတို့သညျအဘို့ယုတ် PATHOS Screener ရမှတ် (4.53 ခဲ့သည်SD = 1.48); ယုတ်ကျန်းမာဘာသာရပ်နမူနာများအတွက်ရမှတ် (ဎ = 192) (1.52 ခဲ့သော်လည်းSD = 1.19) ။ ဤသည်ခြားနားချက် (ကစာရင်းအင်းသိသာခဲ့သည်t(968) = 29.8, p <.001; M ခြားနားချက် = 3.01, 95 မှ 2.81% CI = 3.21) ။ အဆိုပါ 808 အမျိုးသမီးသင်တန်းသားများကိုများအတွက်ရလဒ်များအလားတူခဲ့ကြသည်။ လူနာနမူနာ (ဎ = 340) တွင်မိန်းမများအဘို့အဓိပ်ပာယျကိုရမှတ် (3.82 ခဲ့သည်SD = 1.50); ယုတ်ကျန်းမာဘာသာရပ်နမူနာများအတွက်ရမှတ် (ဎ = 598) (1.16 ခဲ့သော်လည်းSD = 1.12) ။ တဖန်အုပ်စုနှစ်စုအကြားရမှတ်များအတွက်တစ်ဦးကစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက် (ရှိခဲ့t(936) = 28.5, p <.001; M ခြားနားချက် = 2.66, 95 မှ 2.48% CI = 2.84) ။
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုနမူနာနှစ်ဦးစလုံးအတွက်, PATHOS ၏ပြည်တွင်းရေးကိုက်ညီမှုအသီးသီး KR-20 = .94 နှင့် KR-20 = .92 မှာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ အာအိုစီ၏ရလဒ်များ (အထီးနမူနာအဆိုပါ PATHOS ဟာကွေးအောက်ရှိဧရိယာ၏ 92.4% ဖမ်းဆီးရမိကြောင်းညွှန်ပြဘို့လေ့လာဆန်းစစ်p <.001) ။ 3-cut-off ရမှတ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, PATHOS အထီးလူနာနမူနာ (sensitivity ကို) ၏ 88.3% နှင့်ကျန်းမာအထီးနမူနာ (တိကျတဲ့) ၏ 79.7% မှန်ကန်စွာဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အလားတူဖြတ်တောက်ခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည် PATHOS မှအမျိုးသမီးလူနာနမူနာ၏ ၈၀.၉% နှင့်ကျန်းမာသောအမျိုးသမီးနမူနာ၏ ၈၈.၁% ကိုကွေးကောက်အောက်တွင်80.9ရိယာ၏ ၉၀.၆% ကိုသိမ်းဆည်းထားသည်။p <.001) ။
အဆိုပါ PATHOS မေးခွန်းလွှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲများအတွက်လျင်မြန် Screener အဖြစ်တီထွင်ပေးခဲ့သည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုမှာ၏ရလဒ်များထက်လျော့နည်းတစ်မိနစ်အတွင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရနိုင်သောဤအလွန်အမင်းအကျဉ်းတူရိယာ (ဆိုလိုသည်မှာ, ခြောက်လပစ္စည်းများ), ကြောင်းသရုပ်ပြ, တိကျစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ detect ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ PATHOS များအတွက် sensitivity နှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ် ratings အထူးသဖြင့်မေးခွန်းလွှာများ brevity စဉ်းစား, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တိကျမှန်ကန်မှုကိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ [; နှင့်အရက်အလွဲသုံးစားမှု (91.0% တိကျတဲ့ 87.8% sensitivity ကို); အမှန်စင်စစ်မကြာသေးမီကသုတေသနအရက်မှီခို (87.5% တိကျတဲ့ 80.9% sensitivity ကို) နဲ့ယောက်ျားဖော်ထုတ်အတွက်လှောင်အိမ်မေးခွန်းလွှာများအတွက်အလားတူရလာဒ်များသရုပ်ပြထားပါတယ်Amar နှင့် Malbergier, 2008 ပြုပါ].
ရလဒ်များကိုအလားအလာရှိပါတယ်သော်လည်းသီးခြားနမူနာအပေါ် Cross-validation ကိုတွေ့ရှိချက်ကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ဒုတိယ validation ကိုလေ့လာမှုရလဒ်များ၏တည်ငြိမ်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
Method ကို: နှစ်ဦးကိုလေ့လာ
ဤဒုတိယလေ့လာမှုမှာပါဝင်သူအဆိုပါ SAST-R, မူရင်း SAST ကဲ့သို့တူညီသော PATHOS ပစ္စည်းများပါဝင်သည်ထားတဲ့မူရင်း SAST ၏ 45-ကို item တည်းဖြတ်မူအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ PATHOS မေးခွန်းလွှာပစ္စည်းများကိုအဆိုပါ SAST-R ကို (လေ့လာမှုတစ်ခုမှာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း) မှထုတ်ယူခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ PATHOS ခြောက်လပစ္စည်းများပါဝင်သည်နှင့်အလားအလာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏ထောက်လှမ်းများအတွက်အမြန်စိစစ်တူရိယာအဖြစ်တီထွင်ပေးခဲ့သည်။ items စာရင်းဝင်ဖြစ်ကြောင်း စားပွဲတင်2ပြီး Yes / No format နဲ့သွင်းယူနေကြသည်။
ဒုတိယလေ့လာမှုနမူနာ (N ကို = 913) တွင်တစ်ဦးချင်းစီသုံးလူဦးရေကနေစုဆောင်းခဲ့ကြသည်: ပြင်ပလူနာလိင်စွဲလမ်းများအတွက်ကုသမှုကိုလက်ခံရရှိ (ဎ = 646, 86.8% အထီး), တစ်ဦးချင်းစီလိင်စွဲလမ်းများအတွက်လူနေအိမ်ကုသမှုကိုလက်ခံရရှိ (ဎ = 64, 100% အထီး), နှင့်ဘွဲ့ကြိုကောလိပ်ကျောင်းသားများက (ဎ = 203, 23.2% အထီး) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲအထီးလူနာအကြားပိုပြီးပျံ့နှံ့ကြောင်းပေးထား [Goodman, 1992] ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုစိတ်ရှည်ပါဝင်သူများ၏နံပါတ်များကိုအတွက်သိသိသာသာမညီမမျှမည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုနှစ်ဦးအဘို့နမူနာအသက်အပိုင်းအခြားအတွက်တင်ပြကြသည် စားပွဲတင် 3.
အဆိုပါလေ့လာမှု2နမူနာများအတွက်လူဦးရေအချိုးအစားမှာ Data
အားလုံးလုပျထုံးလုပျနညျးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်များနှင့်သင့်လျော်သောအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်ကိုပျဉ်ပြားကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏ထောက်လှမ်းများအတွက်သင့်လျော်သောစိစစ်တူရိယာအဖြစ် PATHOS မေးခွန်းလွှာမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ရန်အတွက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှင့်အတူလူနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲများအတွက်အထူးပြုကုသမှုစင်တာထံမှနှင့်ပတ်ပတ်လည်ကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲကုသအထူးပြုပြင်ပလူနာကုသ၏လူနာစီးဆင်းမှုကနေစုဆောင်းခဲ့ကြ အမေရိကန်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏အတွင်းလူနာလူနေအိမ်သို့မဟုတ်ပြင်ပလူနာကုသမှုဖြစ်စေဘို့တင်ဆက်ထားပါတယ်တစ်ဦးချင်းစီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှင့်အတူလူနာအကဲဖြတ်လေ့လာမှုတစ်ခုအကြောင်းကိုအသိပေးနှင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ အသိပေးသဘောတူညီခကျြပေးပွီးနောကျ, သူတို့လက်တွေ့စားသုံးမှုအကဲဖြတ်စဉ်အတွင်း (PATHOS ပစ္စည်းများကိုထုတ်ယူခဲ့ကြရာကနေစ) SAST-R ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားလူဦးရေကနေစုဆောင်းခဲ့ကြခြင်းနှင့်သုတေသနလေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အသိပေးသဘောတူညီခကျြပေးပွီးနောကျတိုင်းတာမှုအုပ်ချုပ်ခွင့်ရခဲ့ကြသည်။
internal ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုဟာ Kuder-ရစ်ချတ်ဆန်-20 (KR-20) ကိန်းကို အသုံးပြု. ပေါင်းစပ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုနမူနာအဘို့အအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ frequency အရေအတွက်အပြင်ပလူနာများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကို item မှအပြုသဘောတုံ့ပြန်မှု, လူနေအိမ်ကုသမှုနှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနမူနာဘို့တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ Univariate ANOVA လူနာနမူနာ (s) နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကျားအတွင်းကျောင်းသားနမူနာအကြားခြားနားချက်များ၏အရေးပါမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်လေ့လာဆန်းစစ်။ အာအိုစီအဘို့အလူနေအိမ်ကုသမှုနှင့်ပြင်ပလူနာအုပ်စုများတစ်ဦးပေါင်းစပ်လူနာအုပ်စုတစ်စုကိုဖန်တီးရန်ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်လေ့လာဆန်းစစ်။ ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ကိုသာကျောင်းသားပါဝင်သည်။ လွတ်လပ်သောနမူနာ t-စမ်းသပ်မှုလူနာနှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနမူနာများအတွက် PATHOS ရမှတ်များနှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အာအိုစီယခင်က-စိတ်ပိုင်းဖြတ်လက်တွေ့ cut-off ရမှတ် (ဆိုလိုသည်မှာ, စုစုပေါင်းရမှတ် = 3) ၏လုံလောက်မှုအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုသွားမည်ခဲ့ကြသည်လေ့လာဆန်းစစ်။
တိုင်း၏အကျဉ်းချုပ်ကိုသဘောသဘာဝစဉ်းစား, ပစ္စုပ္ပန်နမူနာများအတွက်ပြည်တွင်းရေးကိုက်ညီမှုလက်ခံနိုင်ဖွယ်ခဲ့ (ယောက်ျား: KR-20 = .77; အမျိုးသမီးတွေ: KR-20 = .81) [ဂျော့ခ်ျနဲ့ Mallery, 2003] ။ အထီးနမူနာနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးက univariate ANOVA (သိသာခဲ့သည်F(2,669) = 53.71, p <.001; adj ။ R2 = 0.14; ပါဝါ = 1.00) ။ Post ကို hoc ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်မညီမျှမှုအုပ်စု Tamhane variances သုံးပြီး, သုံးခုစလုံးအုပ်စုများအချင်းချင်း (လူနေထိုင်ရာကုသမှုအနေဖြင့်သိသိသာသာကွဲပြားကြောင်းတွေ့ရှိရ M = 4.78, SD = 1.46; ပြင်ပလူနာ, M = 3.41, SD = 1.87; ကျောင်းသားများ, M = 1.21, SD = 1.232) ။ အမြိုးသမီးမြားကိုသာအုပ်စုနှစ်စုရှိခဲ့သောကြောင့်, တစ်ဦး t-စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများနှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ အမြိုးသမီးမြားအတှကျ t-စမ်းသပ်မှု (သိသာခဲ့သည်t(239) = 9.75, p <.001;d= 1.51; ပါဝါ = 1 · 00) ။ ယုတ်ကွဲပြားခြားနားမှု (ပြင်ပလူနာအမျိုးသမီးတွေပြင်ပလူနာနှင့်ကျောင်းသားလူတို့သညျအဘို့သူတို့အားအလားတူခဲ့ကြသည်: M = 3.26, SD = 2.11; ကျောင်းသားအမြိုးသမီးမြား: M = 0.88, SD = 1.04; M ခြားနားချက် = 2.38, 95 မှ 1.90% CI = 2.86) ။
(ဎ = 625; ပေါင်းစပ်လူနေအိမ်ကုသမှုနှင့်ပြင်ပလူနာနမူနာ) အာအိုစီမှာယောက်ျားလူနာနမူနာအတွက် PATHOS မှန်ကန်စွာခွဲခြားတစ်ဦးချင်းစီကိုပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနမူနာ (ဎ = 47) ကိုအချိန် 83.3% ။3၏ cut-off ရမှတ်အသုံးပြုခြင်းသည် PATHOS မှန်ကန်စွာ 69.6 လူနာနမူနာ (sensitivity ကို) ၏% နှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနမူနာ (specification) ၏ 80.9% ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အာအိုစီတှငျအမြိုးသမီးမြား၏နမူနာများလေ့လာဆန်းစစ် (ပြင်ပလူနာဎ = 85; ကောလိပ်ဎ = 156) ကို PATHOS မှန်ကန်စွာခြုံငုံနမူနာ၏ 81.4% ခွဲခြား။3၏ cut-off ရမှတ်အသုံးပြုခြင်းသည် PATHOS မှန်ကန်စွာ 65.9 လူနာနမူနာ (sensitivity ကို) ၏% နှင့်ကျန်းမာနမူနာ (specification) ၏ 91.0% ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
လေ့လာမှုနှစ်ဦး၏ရလဒ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲများအတွက်အကျဉ်း Screener အဖြစ် PATHOS မေးခွန်းလွှာများ utility ကိုများအတွက်အပိုဆောင်းထောက်ခံမှုပေး။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုနမူနာများအတွက်ပြည်တွင်းရေးကိုက်ညီမှုခန့်မှန်းချက်လုံလောက်သောယုံကြည်စိတ်ချရအကြံပြုသည်။ အဆိုပါ ANOVA ရှင်းလင်းစွာသုံးခုစလုံးအုပ်စုများအကြားကွဲပြားခြားနားသွားနေဖြင့် PATHOS ၏အထူးသဖြင့်အထင်ကြီးစရာစွမ်းဆောင်ရည်သရုပ်ပြလေ့လာမှုနှစ်ဦးအတွက်အထီးအုပ်စုများ၏လေ့လာဆန်းစစ်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ဟာ PATHOS မေးခွန်းလွှာ Clinician မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲရောဂါလက္ခဏာများ၏အပိုဆောင်းအကဲဖြတ်ခြင်းမှအကျိုးရှိမည်ဟုနှင့်လည်းအမှုပြင်းထန်မှုတစ်ကြမ်းတမ်းအညွှန်းကိန်းအဖြစ်အစေခံစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်တစ်ဦးချင်းစီကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတှကျအသုံးဝငျ tool ကိုဖွစျစနေိုကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အမြိုးသမီးမြား၏နမူနာများအတွက် t-စမ်းသပ်မှုရလဒ်များ PATHOS ထိထိရောက်ရောက်ပုံမှန်ကောလိပ်ကျောင်းသားနှိုင်းယှဉ်အုပ်စုတစ်စုကနေပြင်ပလူနာအမျိုးသမီးများကိုခွဲခြားကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ အာအိုစီဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်အမျိုးအစားလေ့လာမှု 1 အတိုင်းတိကျမှန်ကန်မဟုတ်ကြပေမယ့်နေဆဲ PATHOS ၏ထိရောက်မှုကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အခြေစိုက်စခန်းနှုန်းထားများအတွက်ကြီးမားတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုအမျိုးအစားတိကျမှန်ကန်မှုကိုလျှော့ချဖို့လေ့အဖြစ်လေ့လာ2အတွက်အနိမ့်တိကျမှန်ကန်မှုကြောင့်တစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်သေးငယ်ကျန်းမာအထီးနမူနာဖွယ်ရှိသည်။ အမြိုးသမီးမြားထံမှဒေတာအတွက်အခြေစိုက်စခန်းနှုန်းထားများအတွက်တစ်အချိုးမညီမျှမှုများလည်းရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်အချိုးကျသေးငယ်သည်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်သော်လည်း, ဒီအချိုးမညီမျှမှုကိုလည်းတိကျမှန်ကန်မှု attenuated ကြပေမည်။ ပြင်ပလူနာလျော့နည်းပြင်းထန်သောရောဂါဗေဒအစီရင်ခံရန်လေ့အဖြစ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဒေတာနှစ်ဦးစလုံးအဘို့, ပြင်ပလူနာအချက်အလက်များ၏ပါဝင်မှုလည်း (ယောက်ျားလူနာတွေအတွက်နည်းလမ်းနှိုင်းယှဉ်ရာမှမြင်နိုင်ပါသည်ကဲ့သို့), တိကျမှန်ကန်မှုကိုလျှော့ချကြပေမည်။
ရလဒ်ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်ပေမယ့်, လေ့လာမှုအချို့န့်အသတ်မှတ်ချက်ပြုရပါမည်။ ပထမဦးစွာလူနာနှင့်ကျောင်းသားနမူနာများတွင်ကျားမကိုယ်စားပြုမှု၏ဒီကဗျာမညီမမျှရှိသေး၏။ အဆိုပါလူနာနမူနာ (အကြောင်းကိုခုနစျပါးတစျခုမှ) အမျိုးသမီးတွေထက် သာ. များသောယောက်ျားရှိလျက်ပင်, ကျောင်းသားနမူနာအခြားဦးတည်ချက် (တယောက်စီအကြောင်းကိုအမျိုးသမီးသုံးဦး) တွင်ညီမျှမှုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ကလူနာနှင့်ကျောင်းသားနမူနာအကြားသိသာထင်ရှားသောအသက်အရွယ်ကွဲပြားမှုရှိမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, အနာဂတ်သုတေသနအုပ်စုနှစ်စုအကြားနှိုင်းယှဉ်အတွက်တရားဝင်မှုရန်ခြိမ်းခြောက်မှုအဖြစ်အသက်အရွယ်သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချခြင်း, ကျား, မကိုယ်စားပြုမှုဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ရန်အတွက်အဟောင်းကျန်းမာဘာသာရပ်နမူနာပါဝင်သည်သငျ့သညျ။
လက်ရှိလေ့လာမှုရလဒ်များ PATHOS မေးခွန်းလွှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲများအတွက်စိစစ်မှုအတိုင်းအတာအဖြစ် utility ကိုရှိတယ်လို့ပဏာမသက်သေအထောက်အထားသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောနမူနာကို အသုံးပြု. နေသော်လည်းလေ့လာရေး One နဲ့နှစ်ဦးကသိသိသာသာအလားတူရလာဒ်များသရုပ်ပြခဲ့သည်။ စိတ်ရှည်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာဘာသာရပ်နမူနာအကြားကွဲပြားခြားနားသွားသည့်အခါယေဘုယျအားထက်လျော့နည်းတစ်မိနစ်အတွင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရနိုင်သော PATHOS မေးခွန်းလွှာ, အလွန်ဂုဏ်သရေရှိ sensitivity ကိုနှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ် ratings သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဒါဟာဒီအောက်မှာ-အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အောက်တွင်-ကုသရောဂါကုသမှုများအတွက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်အကဲဖြတ်နှင့် / သို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းခြင်းမှအကြိုးခံစားမညျ့သူတစ်ဦးချင်းစီဖော်ထုတ်အတွက် Clinician ကူညီစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။
နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုတစ်ဦးကသိသိသာသာန့်အသတ် (လေ့လာမှု2အတွက်လူသိများနှင့်လေ့လာ 1 အတွက်ယူဆ) ကိုလိင်စွဲခြင်းနှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနမူနာအကြားအသက်အရွယ်နှင့်ကျား, မများ၏လူဦးရေဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ပထဝီလိုက်ဖက်လိင်၏အနာဂတ်နှိုင်းယှဉ်စွဲခြင်းနှင့်ကျန်းမာနမူနာအသုံးဝင်သောပါလိမ့်မယ်။ အနာဂတ်သုတေသနကိုလည်းယင်း၏အသုံးပြုမှုအတွက်အပိုဆောင်းထောက်ခံမှုပေး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲမရှိဘဲအဟောင်းတွေကျန်းမာဘာသာရပ်နမူနာအတူ PATHOS မေးခွန်းလွှာများအသုံးပြုမှုအဖြစ်လက်တွေ့နမူနာမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြမှကောက်ယူရပါမည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏နမူနာထိုကဲ့သို့သောအုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးနှိုင်းယှဉ်ဘို့အခွင့်ပြုရန်အမျိုးမျိုးသောတိုင်းရင်းသားလုံလောက်သောကိုယ်စားပြုမပေးခဲ့ပါဘူး။ လိင်စွဲလမ်းနှင့်အတူတိုင်းရင်းသားလူနည်းစု၏လုံလောက်သောလူနာနမူနာရယူကိုလည်းသူများအုပ်စုတွေပိုကောင်းအကဲဖြတ်နှင့်ကုသမှုများအတွက်ခွင့်ပြုအနာဂတ်သုတေသနများကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးလေ့လာမှုအဘို့အခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် PATHOS ဒေတာခြောက်နိုင်ငံကို item PATHOS မေးခွန်းလွှာစီမံခန့်ခွဲအသုံးပြုပုံမဟုတ်ဘဲ SAST နှင့် SAST-R ၏အုပ်ချုပ်ရေးကနေ PATHOS ကို item data တွေကိုထုတ်ယူအားဖြင့်ကောက်ယူမခံခဲ့ရပါ။ ဒါကြောင့်နှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများအကြားကိုက်ညီမှုပေးထားမဖြစ်နိုင်ပုံရသည်သော်လည်းဆိုးကျိုးများမိန့်ထိုမေးခွန်းကိုကွဲပြားခြားနားသောမိဘမေးခွန်းနှင့်မသက်ဆိုင်သောနမူနာကိုအသုံးပြုပြီးသောကြောင့်ရလဒ်များမှာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနိုငျခဲ့အချို့သောအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ။
ယခင်ကမရှိ, အကျဉ်း Screener လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏အလားအလာအမှုများကိုဖော်ထုတ်ရန်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အမှန်စင်စစ်ကုသမှုအနေဖြင့်အကျိုးရှိမည်ဟုသူအများအပြားတစ်ဦးချင်းစီ undiagnosed ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ PATHOS မေးခွန်းလွှာဒီလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဖို့နဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလက္ခဏာတွေထဲကနေဆင်းရဲခံရစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်တစ်ဦးချင်းစီဖော်ထုတ်အတွက် Clinician အထောက်အကူပြုဖို့တီထွင်ခဲ့သည်။ လက်ရှိရလဒ်တွေကိုယေဘုယျအလေ့အကျင့်များသို့မဟုတ်အခြားလက်တွေ့ setting တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏အကျဉ်း Screener အဖြစ်က၎င်း၏အသုံးပြုမှုအတွက်ထောက်ခံမှုပေး။
တတိယစာရေးဆရာမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအမျိုးသားသိပ္ပံ (NIDA) လေ့ကျင့်ရေးထောက်ပံ့ငွေ T32-DA-07313-10 (Linda ခ Cottler PI) ကအစိတ်အပိုင်းအတွက်ထောက်ခံခဲ့သည်။ NIDA လေ့လာမှုဒီဇိုင်းမရှိထပ်မံအခန်းကဏ္ဍရ၏ ဒေတာများစုဆောင်းခြင်း, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အနက်ကိုပြခြင်း, အစီရင်ခံစာ၏အရေးအသားကိုပြခြင်း, သို့မဟုတ်ထုတ်ဝေရန်များအတွက်စက္ကူတင်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။
1အဆိုပါ W-SAST ပိုကောင်းအမျိုးသမီးလိင်စွဲ detect လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့သည့်မူရင်း 25-ကို item SAST ၏အစောပိုင်းအခြားပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ W-SAST သာခြောက်လပစ္စည်းများပြောင်းလဲနေတဲ့မူရင်း SAST ဆင်တူကြီးနှင့်အနည်းငယ်သုံးအခြားသူတွေ rewording ။ ခြောက်နိုင်ငံ PATHOS ပစ္စည်းများအားလုံးသည်လည်း W- SAST ပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ထဲကနှစ်ဦးကိုအနည်းငယ် W-SAST အတွက် reworded ခဲ့ကြသည်။
2စာရေးသူအနေဖြင့်တောင်းဆိုမှုကိုအပျေါမှာရရှိနိုင် ANOVA pairwise နှိုင်းယှဉ်ယုံကြည်မှုကြားကာလ။
ဒါကထုတ်ဝေမှုအတွက်လက်ခံလိုက်ပါသည်တစ်ခုတည်းဖြတ်ခြင်းမရှိဘဲလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့ PDF ဖိုင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ကျနော်တို့ကလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ဤအစောပိုင်းဗားရှင်းပေးနေကြသည်။ ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံး citable form မှာထုတ်ဝေမီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် copyediting, လုပ်ခြင်း, စာစီ, နှင့်ရရှိလာတဲ့သက်သေ၏သုံးသပ်ချက်ကိုခံယူပါလိမ့်မယ်။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအမှားအယွင်းများအကြောင်းအရာကိုထိခိုက်နိုင်သည့်ရှာဖွေတွေ့ရှိစေခြင်းငှါ, ထိုဂျာနယ်လျှောက်ထားသောသူအပေါင်းတို့သည်ဥပဒေရေးရာအကြောင်းသတိပြုစရာများစပ်ဆိုင်သောအကြောင်းသတိပြုပါ။
APA ။ စိတ်ရောဂါ၏ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ - 4th Edition, စာသားကိုပြန်လည်တည်းဖြတ် (DSM-IV-R) အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း; ဝါရှင်တန်ဒီစီ: 2000 ။
ဘာလင် FS ။ အခြေခံပညာသိပ္ပံနှင့် neurobiological သုတေသန: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ဖို့အလားအလာဆက်စပ်မှု။ မြောက်အမေရိက၏စိတ်ရောဂါဆေးခန်း။ 2008 ဒီဇင်ဘာ; 31 (4): 623-42 ။ [PubMed]
Black က DW ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ရောဂါနှင့် phenomenology ။ CNS Spectrum ။ 2000 ဇန်နဝါရီ;5(1): 26-72 ။ [PubMed]
Carnes PJ ။ အရိပ်ထဲကထုတ်: နားလည်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ။ CompCare ထုတ်ဝေ; Minneapolis, MN: 1983 ။
Carnes PJ ။ ဘားနှင့် bordellos: လိင်စွဲလမ်းနှင့်ဓာတုမှီခို။ Professional ကအကြံပေး; 1988 ။
Carnes PJ ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ဆန့်ကျင်: အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲကူညီပေးခြင်း။ Hazelden; Center ကိုစီးတီး, MN: 1989 ။
Carnes PJ ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကမခေါ်ပါနဲ့: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲကနေ Recovery ကို။ Bantam စာအုပ်များ; နယူးယောက်: 1991 ။
Carnes PJ ။ လိင်စွဲလမ်း။ အဆိုပါအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်; 1991 ။
Carnes PJ ။ အရိပ်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရ။ နူးညံ့သိမ်မွေ့ Path ကိုစာနယ်ဇင်း; အပူအပင်ကင်းပြီး, AZ: 2001 ။
Carnes PJ, အဒမ် KM, အယ်ဒီတာများ။ လိင်စွဲလမ်း၏လက်တွေ့စီမံခန့်ခွဲမှု။ Brunner-Routledge; နယူးယောက်: 2002 ။
Carnes PJ ။ အခန်း 18.4: လိင်စွဲ။ In: Sadock S အယ်ဒီတာ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ပြည့်စုံသောဖတ်စာအုပ်။ Lippincott, ဝီလျံ & Wilkins; Philadelphia တွင်, PA: 2005 ။
Carnes PJ, Green BA, Carnes S. တူညီသော်လည်းကွဲပြားခြားနားသည် - လိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်ကျားမကွဲပြားမှုကိုထင်ဟပ်စေရန်လိင်စွဲလမ်းမှုကိုစစ်ဆေးခြင်းစစ်ဆေးခြင်း (SAST) ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း 2010; 17 (1): 7-30 ။
Carnes PJ, Murray RE, Charpentier L. ပရမ်းပတာဖြစ်မှုများ - လိင်စွဲလမ်းသူများနှင့်စွဲလမ်းမှုအပြန်အလှန်ရောဂါ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း 2005; 12: 79-120 ။
Coleman E. လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူအားဖော်ပြရန်စွဲလမ်းမှု - compulsive model Preventive Psychiatry & Neurology ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1990;2(1): 9-14 ။
Coleman-ကနေဒီ C. အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏ရောဂါ။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါသူနာပြုများအသင်းဂျာနယ်။ 2002; 8 (5): 143-51 ။
Cozolino အယ်လ်လူ့ဆက်ဆံရေး၏ neuroscience: နှောင်ကြိုးများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲလူမှုရေးဦးနှောက်။ က Norton; နယူးယောက်: 2006 ။
Delmonico DL, Miller ကဂျေအေ။ အင်တာနက်ကိုလိင်စိစစ်စမ်းသပ်: Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ၏တစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ်။ လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးမျိုးကုထုံး။ 2003; 18 (3): 261-76 ။
Amar RA, လှောင်အိမ်မေးခွန်းလွှာများ Malbergier အေထိရောက်မှု, gamma-glutamyltransferase နှင့်အလုပ်ခွင်အတွင်းအရက်သေစာ-related ပြဿနာများအတွက်အမှတ်အသားများအဖြစ်သွေးနီဆဲလ် corpuscular အသံအတိုးအကျယ်ကိုဆိုလိုတာလုပ်ပါ။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေ။ 2008 ဇွန်; 33 (6): 772-81 ။ [PubMed]
Earl R ကို, Earl အမ်လိင်စွဲ: ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု။ Brunner မာဇယ်လ်၏; နယူးယောက်: 1995 ။
Ewing ဂျေအေ။ အရက်ဖော်ထုတ်မယ်။ လှောင်အိမ်မေးခွန်းလွှာ။ ဂျေအေအမ်အေ။ 1984 အောက်တိုဘာ 12; 252 (14): 1905-7 ။ [PubMed]
George D, ၀ င်းဒိုးအတွက် Mallery P. SPSS တစ်ဆင့်ချင်းစီ - ရိုးရိုးလမ်းညွှန်နှင့်ကိုးကားချက်၊ ၁၁.၀ မွမ်းမံခြင်း။ 11.0th ed ။ Allyn & Bacon; ဘော်စတွန် - ၂၀၀၃ ။
Goodman A. လိင်စွဲ: အမည်နှင့်ကုသမှု။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်။ 1992 ဆောင်းရာသီ; 18 (4): 303-14 ။ [PubMed]
ချိတ်ဖြစ်မှု, ချိတ် JP, Davis က DE, Worthington EL, Penberthy JK ။ တူရိယာတစ်ခုအရေးပါပြန်လည်သုံးသပ်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှင့် compulsive တိုင်းတာခြင်း။ လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်။ 2010 မေလတွင် / ဇွန်လ; 36 (3): 227-60 ။ [PubMed]
Hunt က SA, Kraus လုပ် SA ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်လူငယ်လူကြီးများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြတ်တောက်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရဆက်စပ်မှုကိုလေ့လာခြင်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း 2009 ဇန်နဝါရီ; 16 (1): 79-100 ။
Kafka အမတ်။ အခန်းကြီး 30: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviance အတွက် Neurobiological လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် comorbidity ။ ခုနှစ်တွင်: ဥပဒေ DR, O'Donohue WT, အယ်ဒီတာများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviance ။ သီအိုရီ, အကဲဖြတ်များနှင့်ဆက်ဆံမှု။ ed 2nd ။ Guilford; နယူးယောက်: 2008 ။
Kafka အမတ်။ Hypersexual Disorder: DSM-V ကိုများအတွက်တစ်ဦးကအဆိုပြုချက် Diagnosis ။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2010 နိုဝင်ဘာ 24; 39 (2): 377-400 ။ [PubMed]
Kalichman SC, Rompa ဃအဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive စကေး: နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် HIV ပိုးပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူသုံးပါ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကဲဖြတ်၏ဂျာနယ်။ 2001; 76 (3): 379-95 ။ [PubMed]
Krueger RB, Kaplan က MS ။ အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါအခြေအနေများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ် disorders ။ လက်တွေ့ Neuropsychiatry အတွက်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ။ 2000 အောက်တိုဘာ;5(4): 266-74 ။ 2000 ။ [PubMed]
Milkman H ကို, ecstasy များအတွက် Sunderwirth အက်စ်တဏှာ: ထွက်ပေါက်၏သတိနှင့်ဓာတုဗေဒ။ Lexington စာအုပ်များ; နယူးယောက်: 1987 ။
Orford ဂျေ Hypersexuality: မှီခို၏သီအိုရီအဘို့အဂယက်ရိုက်။ အရက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများမှစွဲလမ်းခဲ့သည့်ဗြိတိသျှဂျာနယ်။ 1978 စက်တင်ဘာ; 73 (3): 299-10 ။ [PubMed]
Orford ဂျေအလွန်အကျွံစားချင်: အစွဲလမ်း၏တစ်ဦးကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထော။ Wiley; Chichester, ဗြိတိန်: 1985 ။
Schneider JP ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ကိုဘယ်လို။ လက်ျာမေးခွန်းတွေမေးလေးနက်ပြဿနာများကိုချဉ်းလိမ့်မည်။ ဘွဲ့လွန်ဆေးပညာ။ 1991 နိုဝင်ဘာ 1; 90 (6): 171-4 ။ 7-82 ။ [PubMed]
Skegg K ကို Nada-Raja က S, Dickson N ကိုပေါလုသည် C. သည့်ဒန်နီးဒင် Multidisciplinary ကနျြးမာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီလေ့လာမှုကနေငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးဆောင်များတွင်ထဲမှာ "ထိန်းချုပ်မှုထဲက" လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူခံစား။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2010 သြဂုတ်; 39 (4): 968-78 ။ [PubMed]
Stein DJ သမား, Black က DW, Pienaar ဒဗလျူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမမှန်မဟုတ်ရင်မသတ်မှတ်ထားပါ: compulsive စွဲလမ်း, ဒါမှမဟုတ်ထကြွလွယ်သော? CNS Spectrum ။ 2000 ဇန်နဝါရီ;5(1): 60-4 ။ [PubMed]
Stein DJ သမား, ဟူဂိုက F, Oosthuizen P ကို, Hawkridge သည် SM, Heerden BV ။ hypersexuality ၏ Neuropsychiatry ။ CNS Spectrum ။ 2000 ဇန်နဝါရီ;5(1): 36-46 ။ [PubMed]
ဆယ်ကျော်သက်အကြား Sussman အက်စ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ: တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ 2007 အောက်တိုဘာ; 14 (4): 257-78 ။